အထွေထွေ – Shwe Canaan
May 5, 2016 Shwe Canaan 0
ယနေ့မျက်မှောက်ခောတ်တွင် ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း တစ်လေးတစ်စားဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိသော မိခင်များနေ့သည် ဘာသာရေးသမိုင်းကြောင်းတွင်၎င်း ဘာသာရေးသွန်သင်ချက်များတွင်၎င်းအခြေပြုအစတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြပါ။ မိခင်များအား လေးစားသမှုပြုလျှက် ဂုဏ်ပြုရန် သားသမီးတို့ စိတ်အတွင်းဝယ် နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသော်လည်း အကောင်အထည်အနေဖြင့်သမိုင်းတွင်မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း မိခင်အတွက်ဘ၀ကို နှစ်မြှပ် ပုံအောနှစ်မြှပ်ပြီး၊ မိခင်အားအလေးပေးသည့် သမီးလိမ္မာတစ်ဦးသည် မိခင်မရှိတော့သည့် နောက်တွင် မိခင်အားလေးစား ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း သက်သေ ပြုရန် အာသီသပြင်းပြသောစိတ်မှ […]
April 19, 2016 Shwe Canaan 0
ယေရှုခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာကြသောအခါသက်တော် (၁၂) နှစ်မှ အနှစ် (၃၀) အတွင်း ကြားကာလ (၁၈) နှစ်တွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘယ်မှာရှိနေသနည်း။ ထိုကာလ ယေရှုခရစ်တော်၏ ဘ၀တစိတ်တပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ခရစ်တော်ကြောင့် … ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာ ဓမ္မဟောင်းကို အခေပြုထားတာမို့ အလွန်ရှေးကျတဲ့ ဘာသာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း […]
Jehovah ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ထာဝရဖြစ်သည်။(က၊၂၁း၃၃၊ ထွ၊၃း၁၃-၁၄၊ ၆း၃၊ဆာလံ၊ ၈၃း၁၈၊ ဟေရှာ၊ ၁၂း၂။ ၂၆း၎) 1. Jehovah Elohim-the Eternal Creatorထာဝရဖန်ဆင်းရှင် အကြိမ်(၁၀၀)မကဖော်ပြထားပါသည်။(က၊၂း၎-၂၅ )2. Jehovah Adonai – the Lord our Sovereign; Master Jehovahတန်ခိုးအာဏာတော်အတိုင်းမသိ၊ကြီးကဲထွဋ်မြတ်ေ 3.Jehovah Jireh […]
Amazing Grace “အံ့ဖွယ်ကျေးဇုးတော်” သီချင်း၏ ရာဇ၀င်
March 9, 2016 Shwe Canaan 0
သီချင်းစာသား – ဂျွန်နယူးတန် (၁၇၂၅-၁၈၀၇)တေးရေး – ကာရယ်နှင့် ကလေတန်တို့၏ဗာဂျီနီးယား ဟာမိုနီ 1831 မှကျမ်းညွှန်း – ၅ရာ ၁၇း၁၆-၁၇ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အိုနေမြို့တွင် ရှိသော ဘုန်းတော်ကြီးပိုင် အသင်းတော်ဝင်း တစ်ခု၌ လိပ်သဲကျောက်ဖြင့် ဆောက်ထား သော အုပ်ဂူလေးတစ်ခုအပေါ်တွင် ကဗျည်းထိုး ထားသော […]
ဂျူးလူမျိုး အစ္စရေးနိုင်ငံ သမိုင်းအကျဉ်း။
August 26, 2014 Shwe Canaan 0
ဂျူးလူမျိုးများ၏ ဖခင် အာဗြဟံသည် ဘီစီ ၁၈၀၀ တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် မြေ၀ယ် ယူခဲ့သည်။ (ယခုအချိန်တွေင် ပါလက်စတိုင်းများ သိမ်းပိုက် ထားသော ဒေသဖြစ်သည်)ဘီစီ ၁၇၀၀ – အာဗြဟံ၏ သားငယ် ယာကုပ်သည် အစ္စရေး ဟု ဂျူးဘုရားမှ ပြောင်းလဲခေါ်ကာ ထိုမှစရ်ျ မျိုးဆက် […]
May 11, 2014 Shwe Canaan 0
အမေများနေ့ မွေးသမိခင်တွေရဲ့ ကျေးဇူးကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကျင်းပကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ နေ့ထူးတစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းမှာတော့ နေ့တွေကို ကွဲပြားစွာ ကျင်းပ ဂုဏ်ပြုနေကြတာပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ ဧပြီနဲ့ မေလကြားမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ ၂၀ရာစုနှစ်အစောပိုင်း ကတည်းက အမေရိကမှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအမေရိကန် ခေတ်သစ် […]
February 15, 2014 Shwe Canaan 0
ရောမ အင်ပါယာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေဒီ ၂၀၀ ကျော် ကာလက ဖြစ်ပြီး ရောမ စစ် ဘုရင် တို့ သွေး ဆူနေချိန် ဖြစ်ပါ တယ်။ စစ် တိုက် ဖို့သာ အချိန် တိုင်းတွေးနေပြီး ရောမ အင်ပါ ယာကို […]
October 28, 2013 Shwe Canaan 0
ဇွန်လ(၁၅)ရက် ၂၀၀၉ခုနှစ် နွေဦးပေါက်တွင် စူဆန်ဘွိုင်းသည် ´´Britain’s Got Talent´´ အင်္ဂါနေ့ အစီ အစဉ်၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အခြားပြိုင် ဖက်များနှင့် ယှဉ်လျှင် သူမပုံစံက ရိုးရိုးလေးပါ လှပသောသံစဉ် သီချင်းစဆိုရန်မိုက် ကိုနှုတ် ခမ်းနှင့်တေ့ လိုက်ချိန် အထိသူမကို မည်သူကမှ မျှော်လင့်မထားဖတ်၇န် […]
THE BIBLE has In it 3,566,480 letters, 810,677 words, 31,175 verses, 1189 chapters and 66 books. The longest chapter is the 119th Psalm. The short- […]
“နေ့စဉ်လုပ်ရမည့်အလုပ် (၇) ခု”
၁။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်။ ၂။ သူများအတွက် ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါ။ ၃။ ကြင်နာသောစိတ်နှင့် သူတစ်ပါးကို စီရင်ပါ။ ၄။ အပြုံးဖြင့်သူတစ်ပါးကိုအားပေးပါ။ ၅။ မြင့်မြတ်သော အကြံအစည်ကို ကြိုးစား၍ဆောင်ရွက်ပါ။ ၆။ မိမိအား ပြစ်မှားသူများကို ဆုတောင်း၍ခွင့်လွတ်ပါ။ ၇။ မိမိထံမှ ဘာမှမမျှော်လင့်သောသူအား အားပေးမစသောစကားတစ်ခွန်းကိုပြောပါ။
ဘာသာရေး ဟောပြောပွဲစာတမ်း ( ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံ စာအုပ်ပါ။)
ဘာသာရေး ဟောပြောပွဲစာတမ်း ကျောက်ကွင်းအရေးဒေါ်ပုံစာအုပ်နှင့်ရှင်းပြမှု ဘာသာရေး ဟောပြောပွဲစာတမ်း စောအောင်နိုင်ရဲ့ဖြေကြားချက်ပါ .ကျောက်ကွင်းလန်ကြုတ်..လုတ်ကြံဇတ်အကြောင်းကို..ရှင်းပြပေးခြင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထိုရွာမှ အမှုတော်ဆောင် ဆရာမကြီးတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ အနိုင်အရှုံးများတို့ဖြင့် ဘာသာကူးပြောင်းသွားကြသည် ဆိုသည့်တိုင် မကြီးကျယ်ခဲ့ပါကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူများ ယနေ့ထိတိုင် အသက်ရှင်လျက် […]